မှန်ကန်တဲ့ကိရိယာတွေရှိရင်ငါတို့စိတ်ကူးတွေကမယုံနိုင်စရာအောင်မြင်မှုတွေကိုရနိုင်တယ်။ ၎င်းသည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နယ်ပယ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အားလပ်ချိန်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာကြီးတွင်ပိုအလေးချိန်ရှိသောနယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်သောဓာတ်ပုံများနှင့်ရုပ်ပုံများနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိစ္စဖြစ်သည်။ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့မည်သည်ကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားကြမည်နည်း ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဓါတ်ပုံများကို montages လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်.
မင်းရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုအထင်ကြီးစရာပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့အံ့သြအောင်၊ မင်းရဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အာရုံကိုဆွဲဆောင်၊ မင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာထင်မြင်ချက်တွေ၊ ကြိုက်နှစ်သက်မှုတွေကိုရိတ်ပါ၊ ဒါမှမဟုတ်မင်းသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ရယ်မောလိုက်ပါ။ ဤအရာသည်ဤအစီအစဉ်များကိုလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရာအချို့သာဖြစ်သည်။
ငါတို့နောက်ပြမယ့်စာရင်းကဒါပဲ အသုံးဝင်သောကိရိယာများကိုရွေးချယ်ခြင်း မင်းရဲ့ပန်းတိုင်တွေကိုရောက်ဖို့ ၎င်းတို့အများစုသည်စတိုးတွင်အခမဲ့ရှာ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်သောအက်ပ်များဖြစ်သည် Google Play စတိုး, ၎င်းတို့အားသင်၏မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းမှလွယ်ကူစွာသုံးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းတွင်ပါဝင်သည် အဆိုပြုချက်ကိုးချက် (များစွာရှိနိုင်သော်လည်း) ကျွန်ုပ်တို့သည်အက္ခရာစဉ်အတိုင်းတင်ပြသည်။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသောရွေးချယ်မှုများ၊ အချို့သည်အခြားသူများထက်ပိုသိသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အံ့မခန်းရလဒ်များရရှိရန်စုံလင်သည်။
1 Adobe က Photoshop ကို Express ကို
3 ဓာတ်ပုံ Collage
8 Textaizer Pro ကို
Adobe က Photoshop ကို Express ကို
Adobe Photoshop Express: ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဓာတ်ပုံများကို montages ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်။
ငါတို့စာရင်းကိုငါတို့ဖွင့်တယ် Adobe က Photoshop ကို Express ကိုကျွန်ုပ်တို့အားအလွန်လျင်မြန်။ အစွမ်းထက်သောဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်မှုများကိုလွယ်ကူစွာပြုလုပ်နိုင်သောအခမဲ့မိုဘိုင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် collage များဖန်တီးရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်၊ ချက်ချင်းစစ်ထုတ်မှုများ ("ပုံများ" ဟုခေါ်သော) အသုံးချမှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံများကိုပြန်ဆွဲပြီးလူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်ချက်ချင်းဝေမျှနိုင်သည်။
ကောင်းမွန်သောပုံအယ်ဒီတာတစ် ဦး ၏မျှော်မှန်းထားသည့်အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံး မှလွဲ၍ Photosohop ၏ဤဗားရှင်းသည် collage များကိုတည်းဖြတ်ရန်၊ memes များဖန်တီးရန်နှင့် photomontages အမျိုးမျိုးကိုပြုလုပ်ရန်လည်းကူညီသည်။
mounting နှင့်တည်းဖြတ်ပြီးနောက် Instagram သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်လူမှုကွန်ယက်တွင်မဆိုရလဒ်ကိုဝေမျှရန်မှာလွယ်ကူသည်။
တိုတိုပြောရရင်၊ ပြီးပြည့်စုံသော၊ လုံခြုံပြီးအခမဲ့ application ဖြစ်သည်မရ။ မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းဤမျှလွယ်ကူစွာသင်၎င်းနှင့်အတူမယုံနိုင်စရာဓာတ်ပုံပေါင်းများစွာကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
download link: Adobe က Photoshop ကို Express ကို
Bixoram ၎င်းသည်အမှန်တကယ်အံ့မခန်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်သင်လုပ်နိုင်သည် မည်သည့်မြင်ကွင်းကျယ်ဓာတ်ပုံကိုမှမတူညီသောပုံစံ ၁၃ မျိုးအထိပြောင်းပါပိုထင်ရှားသည့်အရာ - စက်လုံးများ၊ ရုပ်ပုံပြားများသို့မဟုတ်အပိုင်းများ၊ ကျီးကန်းမြေပုံများနှင့်အခြားအရာများ ၎င်းတို့အနက်ကျွန်ုပ်တို့သည် Apple ၏ QuickTime VR နှင့် Microsoft ၏ DirectX DDS ကဲ့သို့အထူးလူကြိုက်များသောအရာများကိုမီးမောင်းထိုးပြရမည်။
၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပုံရသည်၊ သို့သော် Bixorama နှင့်အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ နည်းလမ်းသည်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရိုဂရမ်သို့အသွင်ပြောင်းလိုသော ဦး တည်ချက်ပုံစံများထဲမှတစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်ပုံကိုတင်သွင်းခြင်းတွင်ပါဝင်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကိုတိုတိုနှင့်လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်သည် အလိုလိုသိ interface ကို အစီအစဉ်၏ ကလစ်အနည်းငယ်နှင့်သင်ပြီးပါပြီ။
မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆို Bixorama သည်မြင်ကွင်းကျယ်ပုံများနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော software တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပုံတူဓာတ်ပုံများပေါ်မှရလဒ်များသည်သိပ်မသိသာပါ။
download link: Bixoram
collage နှင့်ပတ်သက်လျှင် Photo Collage သည်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဓါတ်ပုံများကို montages ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်ဖြစ်နိုင်သည်။
collage ဖန်တီးခြင်းအတွက်ပရိုဂရမ်များနှင့်မိုဘိုင်းအပလီကေးရှင်းများစွာရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုများစွာရှိပြီးရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ သို့သော်ပထမရာထူးအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ် ဦး သာဖြစ်သည် ဓာတ်ပုံ Collage (သူ့နာမည်ကအကုန်ပြောတယ်။ )
၎င်းသည်သင်ပုံများကိုလျင်မြန်လွယ်ကူစွာတည်းဖြတ်ရန်နှင့်ပူးပေါင်းရန်ခွင့်ပြုသော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူပျော်စရာနှင့်မူရင်း collage များဖန်တီးခြင်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ ဓာတ်ပုံများတစ်တွဲကိုရွေး။ နောက်ခံပေါ်တွင်သင်အလိုရှိသည့်အမိန့်အတိုင်းသူတို့ကိုကပ်ပါ။ တစ် ဦး လက်ရာနည်းလမ်းနီးပါးဓာတ်ပုံအယ်လ်ဘမ်ဟောင်းများမှဂန္ထဝင်ပုံတူပုံများကဲ့သို့
ပိုမိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရလဒ်များရရှိရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၊ filter များ၊ စာသားများ၊ စတစ်ကာများနှင့်အခြားသက်ရောက်မှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် collage များကိုပြခန်း၌သိမ်းနိုင်သည်၊ Facebook၊ Instagram၊ Twitter စသည်ဖြင့်လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်နောက်ပိုင်းတွင်မျှဝေနိုင်သည်။
download link: ဓာတ်ပုံ Collage
PhotoFunia ကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများကိုတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုထိမိစေရန်ကောင်းမွန်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ မြောက်မြားစွာသောကိရိယာများ၊ သက်ရောက်မှုများနှင့်တင်းပလိတ်များအသုံးပြုခြင်းကြောင့်မည်သည့်ပုံကိုမဆိုမူရင်းနှင့်အနုပညာအသွင်အပြင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်။
ဒီအစီအစဉ်ကငါတို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ရွေးချယ်စရာတွေထဲကငါတို့ရဲ့ပုံတွေကိုနောက်ခံဒါမှမဟုတ်အဝတ်အစားတစ်ခုခုပေါ်မှာတင်တာ၊ ငါတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယာဉ်ကြောအသွားအလာဆိုင်းဘုတ်ကိုဖန်တီးတာ၊ ဘေလ်ဘုတ်မှာပေါ်လာတာ၊ ဒါမှမဟုတ်နာမည်ကြီးစားပွဲထိုးတစ်ယောက်နဲ့အခြားစားသောက်ဆိုင်တစ်ခုကိုဝေမျှတာကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်တယ်။
၎င်းသည်အသုံးပြုရလွယ်ကူသောပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးမည်သည့်အသုံးပြုသူမဆိုလုံးဝစျေးသက်သာသည်။ ဒါပေမယ့်အားလုံးထက်သာပါတယ် PhotoFunia သည်ပျော်စရာနှင့်ထပ်တူကျသည်- စိတ်ကူးယဉ်နိုင်သောမည်သည့် setting တွင်မဆိုမူရင်းနှင့်ရယ်စရာကောင်းသော montages များဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေများ
၎င်းသည်စတင်အသုံးပြုသူများအတွက်သုံးမည့်အကောင်းဆုံးကွန်ပျူတာဓာတ်ပုံဖြတ်တောက်ခြင်းပရိုဂရမ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ရုပ်ပုံဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းညွှန် photomontages အမျိုးမျိုးကိုစတင်ပြုလုပ်ရန်ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျယ်ပြန့်သောအနားသတ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို၎င်း၏နောက်ခံမှ ခွဲ၍ ပုံများ collage ပြုလုပ်၍ နောက်ခံအကျိုးသက်ရောက်မှုများအသုံးချနိုင်ရန်အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်သိမ်းဆည်းပါ။
စမတ် Patchဓာတ်ပုံ၏ဧရိယာတစ်နေရာကိုဓာတ်ပုံ၏အခြားဧရိယာမှ“ ဖာ” ဖြင့်အစားထိုးရန်ကျွန်ုပ်တို့သုံးနိုင်သည်။
Picture Cutout Guide တွင်အခြားမည်သည့်ဘုံပုံအယ်ဒီတာမဆိုပေါင်းစပ်ပါဝင်သောအခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များပါ ၀ င်သည်။ စတင်ရန်နှင့်လုံးဝအခမဲ့လည်းကောင်းသော tool တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ၎င်းသည် collage ပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးမ ၀ င်ပါ။
download link: ရုပ်ပုံဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းညွှန်
ဤတွင်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ဓါတ်ပုံများကို montages ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်ခေါင်းစဉ်အတွက်ကြီးစွာသောကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်သည်။ Pixlr ပျော်စရာအကောင်းဆုံးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဓာတ်ပုံများဖန်တီးရန်လိုအပ်သောကိရိယာအားလုံးကိုငါတို့ပစ်သည်။
ဆော့ဝဲပေါင်းမြောက်များစွာပါ ၀ င်သည် တင်းပလိတ်များ ဥပမာအားဖြင့် YouTube ပုံသေးများ၊ Instagram ပုံပြင်များသို့မဟုတ် Facebook ပို့စ်များကိုဖန်တီးရန်ဒီဇိုင်းဆွဲထားသည်။ collage ပြုလုပ်ရန်အထူးပြုလုပ်ထားသောတင်းပလိတ်များလည်းရှိသည်။ အခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်လုပ်ဆောင်ချက်များမှာပုံတူများ၊ ဆယ်လ်ဖီများ၊ ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံများနှင့် filter များနှင့်အမြင်အာရုံဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများစွာကိုနောက်ခံဖျက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဤအရာများသည်သုံးသောပရိုဂရမ် Pixlr ၏အောင်မြင်ရခြင်းအကြောင်းအရင်းအကျဉ်းဖြစ်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်သုံးစွဲသူသန်း ၅၀၀ ကျော်ရှိသည်။
ပုံတစ်ပုံ၏နောက်ခံကိုဖယ်ရှားရန်အကောင်းဆုံး application: Remove.bg
တစ်ခါတစ်ရံတွင်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောဓာတ်ပုံများကိုပုံတစ်ပုံ၏နောက်ခံကိုဖယ်ရှားခြင်း (သို့) ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဤအတွက်အကောင်းဆုံးကိရိယာသည် Remove.bg (နောက်ဆုံး "bg" သည်စကားလုံးနှင့်ကိုက်ညီသည် နောက်ခံဆိုလိုသည်မှာနောက်ခံ)
ပုံပညာရှင်များ၊ စျေးကွက်ရှာဖွေဖန်တီးမှုများသို့မဟုတ်ရိုးရိုးကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုသူများသည်ဤကိရိယာ၏လုပ်ဆောင်ချက်များမှအကျိုးကျေးဇူးရနိုင်သည်။ Remove.bg ၏အထင်ရှားဆုံးအရာသည်၎င်း၏ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်မရ။ စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်း၌မည်သည့်ဓာတ်ပုံ၏နောက်ခံကိုမဆိုကွက်လပ်အဖြစ်ထားရန်၊ သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုကိုအခြားထားနိုင်သည်။
ဤကဲ့သို့သောအစီအစဉ်ဖြင့် သိချင်သောဓာတ်ပုံများစွာကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါတို့ရဲ့ပုံရိပ်ကို Great Wall နောက်ခံနဲ့နောက်ခံထားပြီး၊ ငါတို့ရဲ့နှုတ်ခွန်းဆက်ကဒ်ကိုဖန်တီးတာ၊ ငါတို့လူမှုကွန်ယက်အတွက်မူရင်းပရိုဖိုင်ပုံကိုဒီဇိုင်းဆွဲတာတို့၊ ဥပမာတစ်ခုကငါတို့တရုတ်ကိုခရီးအတုလုပ်လို့ရတယ်။
Textaizer Pro ကို
Textaizer Pro: မည်သည့်ပုံကိုစာသားသို့ပြောင်းပါ
အဲဒါကဘာတွေလဲ Textaizer Pro ကို ၎င်းသည်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင်ဓာတ်ပုံများကို montages များပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေရာတွင်၎င်းတွင်ထည့်သွင်းရန်လိုသည်။
ငါတို့ပြောနေတာကအခမဲ့အစီအစဉ်အကြောင်း မည်သည့်ဓာတ်ပုံကိုမဆို mosaic အဖြစ်ပြောင်းပါမရ။ သို့သော်မည်သည့် mosaic မှမပါ၊ စာသားဖြင့်ဖန်တီးခဲ့သည်။ အံ့ဖွယ်အမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင်စာတစ်စောင်ကိုလက်တစ်ဖက်နှင့်အခြားတစ်ပုံကိုသာရွေးရန်လိုသည်။ အဲဒီကနေမင်းအစီအစဉ်ကိုအရာအားလုံးကိုဂရုစိုက်ခွင့်ပေးလိုက်ရုံပဲ။
ရလဒ်များမှာအထူးခြားဆုံးဖြစ်သည်။ Textaizer Pro သုံးစွဲသူများစွာသည်ဤစာသားများကိုလျှို့ဝှက်စာများဖြင့်ပုံများဖြစ်အောင် ပြုလုပ်၍ အချို့သောစာပေစာသားများသို့ပုံစံအသစ်တစ်ခုနှင့်ဖန်တီးမှုပုံစံတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဤဆော့ဝဲဖြင့်ရရှိသောရလဒ်အချို့သည် စစ်မှန်သောအနုပညာလက်ရာများ.
download link: Textaizer Pro ကို
စာရင်းပိတ်ရန်၊ ၎င်းသည်ပျော်စရာကောင်းသကဲ့သို့မူလရွေးချယ်မှုတစ်ခု ချစ်သူမရ။ မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ရဲ့မျက်နှာဖုံးမှာငါတို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ငါတို့စိတ်ကူးခဲ့ဖူးလား။ မှားရင်တောင်
ပရိုဂရမ်တစ်ခုသို့မဟုတ်အပလီကေးရှင်းတစ်ခုမဟုတ်သော်လည်း၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ငွေပေးချေမှုအပြင်ပိုဆိုးတာက။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ခေါင်းစဉ်၏ကြေငြာချက်နှင့်မကိုက်ညီသော်လည်း၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်မှာသေချာသည်။
El အသုံးပြုနည်း ၎င်းသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်၊ သင်ပုံစံ (အကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိ) ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ပုံတစ်ပုံထည့်ပါ၊ စာသားများ၊ အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်အခြားအရာများထည့်ပါ၊ ငါတို့မဂ္ဂဇင်းမျက်နှာဖုံးကိုအဆင်သင့်ရှိသည်။ ထို့နောက်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်အဆက်အသွယ်များအားလုံးကိုလူမှုကွန်ယက်များမှတစ်ဆင့်ဝေမျှနိုင်ပြီးပျော်စရာကောင်းသောအချိန်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - မိုဘိုင်းဖိုရမ် » အင်တာနက်ကို » ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် montages ပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးအစီအစဉ်
Facetime ကို Windows တွင်သုံးနိုင်သလား။5အခမဲ့အခြားနည်းလမ်းများ